XOG: RW Rooble oo ka badbaaday Laba Qodob oo halis geliyay hoggaankiisa Doorashada - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa dagaal xoog leh u galay inuu iska difaaco laba Qodob oo halis ku ahaa kaalintiisa hoggaanka Doorashada igo hoggaanka dalka.
Labadii maalmood ee ugu danbeeyay waxaa Rooble soo wajahay caqabdo adag oo ay ka faa’iideysteen taageerayaasha Farmaajo, una muujiyeen inay qeyb ka tahya awoodii laga dhimay, waxayna ku dhammaadeen inuu dagaal siyasaadeed kadib ku guuleyusto Maxamed Xuseen Rooble.
Qodobnka koowaad aya ahaa shirkii ay go’aamiyeen madaxda dowlad Goboleedyada inuu ka dhacayo Magaalada Garowe, kaasoo laga reebay Ra’iisal wasaaraha, arrintuna u muuqatay in kaalintii Rooble ay meesha ka baxeyso, waxaana shirkii la baajiyey markii kulan beleeed la isku keenay Madaxweynaha Galmudug iyo Ra’iisal wasaraha.
Ujeedka shirkan oo si weyn loo buunbuubiyey ayaa loo fasiray inuu yahay hsir looga takhalusayo awoodii Ra’iisal wasaraha ee Doorashooyinka dalka, waxaana shaki badan la geliyay goobta lagu qabanayo ee magaalda Garowe iyo saameynta madaxeynaha Puntland Siciid C/llaahi Deni.
Qodobka labaad ee Rooble wajahay ayaa ahaa inaab lagu xusin Habraacii Doorashada Aqalka Sare ee Gobollada Waqooyi (Somaliland), waxaana faragelin uu sameeyay xafiiska Ra’iisal wasaaraha kadib la bedelay oo kaalinta Ra’iisal wasaaraha lagu daray sacado kadib markii uu Habraacaasi hawada galay.
Arrimahan waxaa sameyn ku yeeshay khilaafka Farmaajo iyo Rooble oo dagaalkiisa u wareegay baraha bulshada, xilli taageerayaasha Farmaajo ay xoojiyeen inay si shaqsi ah u beegsadaan Ra’iisal wasaraha.
Waxaa mar kale socda waanwaanlah adhex wado Farmaajo iyo Rooble oo markan ay wadaan,madaxweymnaha Galmudug Axmed Qoorqoor iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal.
Previous articleMaxay ku heshiiyeen Rooble iyo Qoorqoor: Mar kale miyuu isbedelay Madaxweynaha Galmudug..?
Next articleWasiir Xundubey oo kashifay Xogtii uu ka hayey RW Rooble. (Dhaqaalihii laga raadiyey Imaaraadka -Qormo-)